सोमवार, आश्विन ४, २०७८
लायन्स क्लब अफ वीरगंज ग्रीन क्याम्पसको आयोजनामा निःशुल्क मास्क वितरण कार्यक्रम सम्पन्न
५७ औं अन्तर्राष्ट्रिय स्थापना दिवसको अवसरमा विश्व हिन्दु परिषद नेपाल द्वारा वीरगन्जमा भव्य शोभायात्रा
आइतवार, भदौ २०, २०७८ विजयपथ न्यूज डेस्क
थाइल्याण्ड ईकरात कम्पनीको प्रविधि र डिजाइन अनुसार सन् १९९२ देखि नै नेपालमा नेपाल ईकरात प्रा.लि ले नीक ट्रान्सफर्मर उत्पादन तथा बिक्रि वितरण गर्दै आएको छ । ट्रान्सफर्मर उत्पादनमा नेपालको नै सबै भन्दा ठूलो कम्पनीका रुपमा रहेको यस कम्पनीले गुणस्तरयुक्त ट्रान्सर्फमर उत्पादन गर्दै आएको छ । २८ वर्ष देखि गुणस्तरयुक्त ट्रान्सर्फमर उत्पादन गर्दै नेपाली बजारको धेरै बजार पाउँदै कम्पनीले लामो समय देखि भुटान र बङ्गलादेशको केही स्थानमा समेत निर्यात गर्दै आइरहेको छ ।
आम उपभोक्ताको मन जित्न सफल भएको नीक ट्रान्सर्फमरको कोरोना महामारी पश्चात् उत्पादनको अवस्था, ट्रान्सफर्मर आयातको अवस्था, स्वदेशी उत्पादनमा सरकारले पुर्‍याएको योगदानको सन्र्दभमा नेपाल ईकरात इन्जिनियरिङ कम्पनी प्रा.लि का प्राविधिक म्यानेजर अभिषेक श्रेष्ठ सँग विद्युत संसारका संवाददाता प्रदिप श्रेष्ठले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
नीक ट्रान्सफर्मरको बारेमा बताईदिनु होस् न ?
नेपाल ईकरात इन्जिनियरीङ प्रा.लि (नीक) नेपालको सबैभन्दा ठूलो ट्रान्सफर्मर उत्पादक कम्पनी हो । यो ईकरात इन्जिनियरीङ कम्पनीसँग जोयन्ड भेन्चर कम्पनी हो । सन् १९९२ देखि यस कम्पनीले नेपाली बजारमा नीक ट्रान्सफर्मरको उत्पादन तथा बिक्रि वितरण गर्दै आएकोमा हाल २८ औँ वर्षमा छौं ।
नीक ट्रान्सफर्मर थाइल्याण्ड ईकरात कम्पनीको प्रविधि अनुसार नै कम्पनीले अहिले सम्म ट्रान्सफर्मर उत्पादन गर्दै आएको छ । नीक ट्रान्सफर्मरले नेपाली बजारमा ठूलो क्षेत्र ओगटेको छ । यसको मूख्य कारण ट्रान्सफर्मरमा भएको गुणस्तर हो ।
नीक ट्रान्सफर्मरले सन् २००० मा आइ.एस.ओ सर्टिफाई प्राप्त गरेको हो । त्यस्तै ट्रान्सर्फमर उत्पादन तर्फ नेपाल गुणस्तर चिन्ह् प्राप्त गर्ने नेपालको पहिलो कम्पनी हो । आइ.एस.ओ ९००१ : २०१५ लेटेस्ट भर्सन प्राप्त कम्पनी पनि हो ।
नेपालमै उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने सोच कसरी उत्पन्न भयो ?
नेपालमा ट्रान्समिसन लाईनहरुको पहुँच बढ्दै जाँदा तीन दशक अगाडि केही प्रोजेक्टहरुमा ईकरातको ट्रान्सफर्मर आयात गरेर राखेपछि हाम्रो कम्पनीले नेपालमा नै ट्रान्सर्फमरको सम्भावना भएकै कारण ट्रान्सफर्मर उत्पादनमा लागेका हौं ।
हाम्रो कम्पनी हाल पनि विदेशी लगानी भएको कम्पनी हो तर सम्पूर्ण व्यवस्थापन भने नेपाली रहेको छ । नेपालमा सम्भावना देखेर नै थाइल्याण्डको प्रविधि अनुसार नेपालमै कम्पनी खोलेको हो जसले रोजगारी समेतमा टेवा पुगेको छ ।
कोरोना महामारीका कारण ट्रान्सर्फमर उत्पादनमा कम्पनीलाई कस्तो असर पुर्‍याएको छ ?
कोरोना महामारीका कारण धेरै क्षेत्रलाई असर पु¥याएको अवस्था छ । हाम्रो कम्पनीको व्यापारकै हिसाव गर्ने हो भने पनि ३५ देखि ४० प्रतिशत सम्म व्यापारमा कमि आएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष केही व्यापार बढेको छ तर कोरोना अघिको जस्तो अवस्थामा पुग्न भने धेरै समय लाग्दछ ।
हाम्रो ट्रान्सर्फमर भुटान र बङ्गलादेशमा निर्यात गर्दै आएकामा निर्यात गर्न समेत समस्या भइरहेको अवस्था छ ।
ट्रान्सर्फमरमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको अवस्था छ तर नेपालमा विदेशी ट्रान्सर्फमर पनि किन आयात भइरहेका छन ?
नेपालमा बढी बिक्रि हुने नीक कम्पनीको ट्रान्सफर्मर हुँदाहुँदै पनि विदेशी ट्रान्सर्फमर नेपालमा आयात भइरहेको छ ।
नेपालमा सबै भन्दा बढी ट्रान्सफर्मर खरिद गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण हो नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन कै कारण नेपाली उत्पादित पछि परेको हो । जुन सस्तो छ त्यहि खरिद गर्नुपर्ने हुँदा प्राधिकरणले गुणस्तरलाई वेवस्था गर्दै चिनियाँ ट्रान्सफर्मर बढी आयात गर्ने गरेका छन् । गतवर्ष देखि केही खरिद ऐनमा सुधार भएका छन् जसले केही मात्रामा भएपनि स्वदेशी उत्पादनलाई सघाउन पुग्ने छ भन्ने आशा छ ।
नीक ट्रान्सफर्मरको गुणस्तरको विषयमा पनि बताईदिनुहोस् न ?
नीक ट्रान्सफर्मर थाइल्याण्ड ईकरात कम्पनीको प्रविधि अनुसार विगत २८ वर्ष देखि गुणस्तरीय ट्रान्सफर्मर उत्पादन तथा बिक्रि वितरण गर्दै आएको कम्पनी हो । हामीले ट्रान्सफर्मरमा दुई वर्षको ग्यारेन्टी तथा पाँच वर्षको वारेन्टी समेत दिएका छौ । नेपालमा ट्रान्सफर्मरमा एक वर्ष देखि दुई वर्ष सम्म ग्यारेन्टी तथा पाँच वर्षको वारेन्टी प्रदान गर्ने पहिलो कम्पनी पनि हाम्रो कम्पनी हो । त्यस्तै हामीले ट्रान्सफर्मर बिक्रि पछि सर्भिसका साथसाथै विदेशी पावर ट्रान्सफर्मरमा समेत सेवा दिदैं आइरहेका छौ ।
गुणस्तरका कारण नै हाम्रो प्रोडक्ट भुटान र बङगलादेशमा लामो समय देखि ट्रान्सफर्मर निर्यात भइरहेका छन् । नेपालमा उत्पादन हुने ट्रान्सर्फमरहरु मध्ये गुणस्तरको हिसावले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट क्वालिफाईड भएका एक मात्र कम्पनी नीक हो ।
नेपाली प्रोड्क्टहरुलाई एउटा उचाईमा लानको लागि सरकारको भुमिका कस्तो हुनुपर्दछ ?
नेपालमा ट्रान्सफर्मर उत्पादक कम्पनीहरु तथा ट्रान्सफर्मरसँग सम्बन्धित कम्पनीहरु धेरै नै रहेका छन् । सरकारले नेपालमा नै उत्पादित वस्तुहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ भने पनि ट्रान्सफर्मरको सन्र्दभमा त्यो लागु भएको देखिदैन । सरकारले हामीलाई सहयोग गर्नुभन्दा पनि गुणस्तरहिन ट्रान्सर्फमर तथा अन्य सामानहरु आयातित हुने मुख्य नाका भन्सार बिन्दुमा नै परिक्षण गरेर कम गुणस्तरका सामग्रीहरुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक छ ।
ट्रान्सफर्मर तथा अन्य जुनसुकै सामग्री खरिद गर्दा सबैभन्दा पहिले गुणस्तरलाई मध्यनजर गर्नु आवश्यक छ । गुणस्तरयुक्त, दीर्घकाल सम्म टिकाउ हुने खालका ट्रान्सफर्मरहरु तथा अन्य सामग्रीहरु मात्र खरिद गर्न आम उपभोक्तालाई आग्रह गर्दछु ।
साभार : विद्युत संसार राष्ट्रिय साप्ताहिक ।
प्रकाशित मिति: आइतवार, भदौ २०, २०७८, ०८:४६:४८
एसईईलाई खारेज गरौं, विद्यालयलाई नै जिम्मा दिऔं
यातायातमा दशैं लाग्यो, लाइसेन्स खुल्यो, दलालहरु मालामाल बुधवार, भदौ ३०, २०७८